बजाज बाइक लिन अब झनै सजिलो : ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरे हुने, ब्याज पनि नलाग्ने ! - Arthatantra.com
बजाज बाइक लिन अब झनै सजिलो : ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरे हुने, ब्याज पनि नलाग्ने !
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बजाजका मोटरसाइकल किन्ने प्रक्रिया झनै सजिलो भएको छ ।
नेपाली बजारमा लोकप्रिय मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी बजाजले अब बाइक किन्ने प्रक्रिया सजिलो बनाईदिएको हो ।
नेपालमा बजाजका लागि आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले शून्य प्रतिशत ब्याजदर तथा ४० प्रतिशत डाउपेमेन्टमा बाइक किन्ने सकिने सुविधा दिएको हो ।
कम्पनीले आजैदेखि अर्थात माघ १८ गतेदेखि नै लागू हुने गरि उक्त सुविधा प्रदान गरेको हो । यो सुविधा बजाजका आधिकारिक वितरक तथा स्वरुमहरुमा उपलब्ध हुनेछ ।
बजाजका नेपाली बजारमा पल्सर, एजेन्जर, डिस्कभर चर्चित अनि लोकप्रिय मोटरसाइकल हो । बजाजले फरक फरक आर्थिक स्तर र भिन्नाभिन्नै रुचि भएकाहरुलाई भिन्नाभिन्नै प्रकारका मोटरसाइकल बजारमा ल्याएको छ । विस्तृतका लागि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
कुनको कति पर्छ मूल्य ?
वि.सं.२०७८ माघ १८ मंगलवार १४:१५ मा प्रकाशित
हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी
अघिल्लाे फेसबुक पेजमा दश हजार लाईक पुगेपछि आईएमई लाइफद्धारा ‘मास्कट’ सार्वजनीक
पछिल्लाे अर्थमन्त्री जनार्दनको सचिवहरुलाई नैतिक दबाब, बारम्बार एउटै कुरा गर्नु राम्रो हैन